bhimphoto: यहाँ चरा, त्यहाँ चरा
लेकसाइडमा एउटा रात वस्तु-बकुल्लाको हुल आकाशमा देखियो । कालो रात । सेता पखेटाधारी । करीब डेढ/दुइ सय हाराहारी हुँदा हुन् । पानी सिमसिम गर्दै थियो । ट्वीटरमार्फ चिनजान भएका भाइ अमरेन्द्र यादवलाई भेट्न केही साथीका साथ म त्यहाँ थिएँ । निकै माथि आत्तिएर आश्रयका लागि भौंतारिएका पंछीलाई दर्शक भएर हेर्नुबाहेकको अरू उपाय पनि थिएन ।
गण्डकी अञ्चलबाहेकका नम्बर प्लेटका गाडी लिएर वा पिठ्युमा ब्याग भिरेर पुग्ने जो कोहीलाई सोध्ने भेटिन्छन् - 'हजुरलाई होटल चाहिएको हो ?' जे होस् त्यो बेलुकीको करिब ९ बजेको समय थियो । बकुल्लाका बथान आकाशमा देखिए । यता उड्दै, उता उड्दै लेकसाइड बीच सडकको पीपलको रूखमा बस्थे । फेरि एकछिनमा उड्थे । यी राति उड्ने चरा होइनन् । किन उडे ? उत्सुकता केहीबेरमै मेटियो । रूखमुन्तिर दुइ तन्नेरी तिनलाई हर्काइरहेका थिए । हुल जब बस्यो, ताली पड्कायो, आवाज निकाल्यो । सेता पखेटाधारी डराउथे र, उड्थे । घुमिफिरी त्यहीँ आएर बस्थे । राति नदेख्ने भएकाले उनीहरू जाउन पनि कता !
यी चरा बिहानैबाट खोला र जलाशय किनारमा आहारा खोज्छन् । साँझ बासमा फिर्छन् । राति डुल्दैनन् । वस्तु बकुल्लाको अर्को विशेषता हो - यिनीहरू चौपायाका किर्ना टिप्छन्, खेतवारीका किरा-फट्याङ्ग्रा खान्छन् । हलुका पँहेलोपना भएको टाउको, पँहेलो चुचो । सेतो ठूलो बकुल्लाका तुलनामा केही मझौलो आकार । झिक्राका अस्तव्यस्त गुँड । हेर्दा राम्रै लाग्ने तर, जहाँ बास गर्छन् ती ठाउँ मुन्तिर फोहर हुन्छ । साँझ-बिहान गुँड फर्केर यी हल्ला पनि बेस्सरी गर्छन् । निलेका आहारा उकेल्छन् र, बचरालाई खुवाउँछन् । बकुल्लाका केही प्रजाति राति पनि आहारा खोज्छन्, उड्छन् । तर, यिनीहरू राति उड्नेमध्येका परेनन् ।
केही मान्छेमा अरुलाई अप्ठ्यारो पारेर मजा मान्ने बानी हुन्छ । यी दुइ मनुवा उस्तै थिए । निहुँ खोज्ने पनि कुरा भएन । यो प्रहरीमा उजुरी गर्ने विषय पनि थिएन । हाम्रो टोलीले हेर्‍यो, हिड्यो । ती अबुझ थिएनन्, पहिरन पनि ठीकै थिए । ती सुकिला-हँसिला तन्नेरीले यी पानीचरालाई बास बस्न नदिएर कतिखेरसम्म हर्काएर उडाइरहे भन्ने थाहा भएन । तर, बकुल्लाको आत्तिएको हुल करीब आधा घण्टा निकै परसम्म उडेको देखियो । त्यसपछि हाम्रो बाटो फरक पर्‍यो । मगजमा निकैबेरसम्म त्यो हुलको सकस सम्झना रहिरह्यो ।
पोखरा बर्ड सोसाइटीका नाममा चराप्रेमीको एउटा समुह वर्षेनी हिउँदमा यात्राको मेलो गर्छ । फेवाताल पश्चिमको क्षेत्रमा बिहानै घुमाइको एउटा यस्तो टोली जसले यहाँ 'ट्रान्जिट' मानेर आउने फिरन्ते र बगाल बढाउने रैथाने चरा हेर्छ ।
'योपल्ट अचम्मै भो ! ६४ स्पीसीज देखियो,' सोसाइटीका संस्थापक मनशान्त घिमिरेले सुनाए, 'अघिल्लोपल्ट हामीले मुश्किलले ३५ देखेका हौं ।' उनका अनुसार यो संख्यामा हिउँदमा बसाइँ आउने ४० प्रजाति देखिए । त्यो बिहान मौसम केही धुम्म थियो । खपौंदीको उक्त क्षेत्र फेवातालको यस्तो भाग हो जहाँ पानी नहुँदा खेती पनि गरिएको देख्न मिल्छ । फेवाताललाई पानी ल्याइदिने खोलाहरू ३/४ वटा छन् । यीमध्ये मुख्य हर्पन खोला हो । यो खोलो वर्षामा केही उत्ताउलो पनि हुन्छ । गएको वर्षायाममा पोखरेलीले पहिले कहिल्यै अनुभव नगरेको घटना भएको हो । हर्पनको बाढीले निकै माटो बगाएर ल्याएको थियो । बाढीका अरू वर्ष पानी एक/दुइ सातामै संङ्लो हुन्थ्यो, योपल्ट झण्डै डेढ महिनापछि मात्रै संङ्लीयो ।
सोसाइटीको चरो हेर्ने मेलोमा अमेरिकाको बोस्टनबाट आएकी पाहुना पनि थिइन् । मनशान्तले आफ्नो ६ सय एमएमको लेन्सले खिच्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहने चराका प्रजाति हेरेर रमाएकी स्टेलेना भास्केभिचलाई फेवाको खपौंदी क्षेत्र रमाइलै लाग्यो । त्यो बिहान चराका किताबमा 'सिलसिले' र अंग्रेजीमा लेसर व्हीसलीङ टील भनिने पानीहाँसका बथान आकाशमा फन्को मार्दै पानीमा बस्दै-उड्दै कलाबाजी देखाइरहेका थिए । उनले भनिन् 'यो यात्रामा चरा हेर्न मात्रै होइन जाडोमा बसाइँ आउनेका बारेमा पनि थाहा पाइयो ।'
पंछी संरक्षण संघका अनुसार ८७६ प्रजातिका चरा नेपालमा रेकर्ड भएका छन् । यिनमा ३६ प्रजाति विश्वमै दुर्लभमध्येका छन् । लामो समयदेखि लाटोकोसेरो संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका राजु आचार्य भन्छन् 'लाटोकोसेरोमात्रै पनि हालसम्म २२ प्रजाति पाइएको छ, यिनमा ८ प्रजाति दुर्लभ छन् ।' उनका अनुसार मान्छेको फेरिएको जीवनशैलीसँगै पक्कीघरको बढ्दो निर्माणले पंछीको बास बस्ने ठाउँ घटाएका छन् । 'भँगेरा, गौंथली आदि चराले जाने ठाउँ अन्त पहिल्याउन गाह्रो परेर पनि अझै मान्छेका घरमा बास लिन छाडेका छैनन्,' उनले भने, 'अरु धेरै चरा यस्ता छन् जो मान्छेकै बासमा बस्न रुचाउँथे, तिनको बसाइँलाई पक्कीघरले उठीबास लगाएको छ ।' तैपनि चराहरू मान्छेका बासभन्दा धेरै टाढा गइसकेका छैनन् । केहीका आहारा खोज्ने, बिस्ट्याउने बानी मान्छेलाई मनपर्नेमध्ये पर्दैन तर, प्रकृतिले सबैलाई निश्चित आयुसम्म बाँच्ने, सन्तान बढाउने, आहारा खोज्ने आ-आफ्नै शैली दिएको छ । हिमालदेखि पहाड र पहाडदेखि तराइ, करेसाबारी, गोठ, खोला, सिमसार, वन र बगैंचा जहाँ पनि चरा भेटिन्छन् ।